WADDANI OO XUKUUMADDA, DAWLADDA HOOSE EE GABILEY IYO KULMIYE KU EEDEEYEY CALANKII EYDDA LOO XIDHAY IYO DUQA GABILEY OO BEEN ABUUR KU TILMAAMAY JAWAABTAAS | Saxil News Network
WADDANI OO XUKUUMADDA, DAWLADDA HOOSE EE GABILEY IYO KULMIYE KU EEDEEYEY CALANKII EYDDA LOO XIDHAY IYO DUQA GABILEY OO BEEN ABUUR KU TILMAAMAY JAWAABTAAS
Hargeysa (SAXILNEWS.COM)_Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI, ayaa wada jir ugu eedeeyay xisbiga Kulmiye, xukumadda iyo dawladda hoose ee Gabiley inay ka dambeeyeen mudaharaad 1-dii bishan magaalada Gabiley lagala hor yimid masuuliyiin xisbiga WADDANI socday oo bookhday Gabiley, hase ahaatee Maayarka Gabiley ayaa eedahaasi ka fogeeyay xukumadda, Kulmiye iyo dawladdiisa hoose.
1-dii December, waxaa magaalada Gabiley bookhasho ku tagay madax ka socda xisbiga WADDANI oo ay ka mid ahaayeen xoghayaha WADDANI Maxamed Cabdillaahi Uurcadde, la taliyaha arrimaha dibadda ee guddoomiye Cirro Faadumo Siciid Ibraahim iyo xildhibaan Siciid Cilmi Rooble, kuwaasi oo hawlo xisbigu leeyahay u tagay halkaasi.
Hase ahaatee saxaafadda qaar ayaa soo bandhigay mudaharaad ay ka muuqdaan dad aan badnayn, kuwaasi oo calanka WADDANI Ey ku heeryeeyay, sidoo kalena kabo ku taagay weftiga. Arrintaasi oo saxaafadda iyo baraha bulshada ku faaftay ayuu xisbiga WADDANI masuuliyadeeda dusha u saaray Xukumadda Siilaanyo, xisbiga Kulmiye iyo dawladda hoose ee Gabiley. Wuxuu ku eedeeyay inay lacagta cashuuraha ah ee bulshada laga ururiyo ku bixiyeen dad ku mudaharaada WADDANI, balse eedahaasi waxaa diiday Maayarka Gabiley. Boobe Yuusuf Ducaale, xoghayaha warfaafinta ee Waddani oo shir jaraa’id ku qabtay xarunta xisbigu ku leeyahay Hargeysa ayaa sidan u eedeeyay saddexanka Xukumadda, Kulmiye iyo dawladda hoose ee Gabiley “Halkudhegyadii ay dadka lacagta ugu laabeen ee ahaa: “Waddani Gabiley ma iman karo iyo wax la mid ah.” Waxa hubanti ah in ay hawshaa galeen oo ay ka danbeeyeen saddexanka isku-raranta aan la mahadin ah ee Xukuumadda, Xisbiga Kulmiye iyo Dawladda Hoose ee Gebilay. Dheecaankii wadhatada laga soo nuugay ayaa qorshayaashaa dhagareed lagu maal-gelinayay. Ceebtood ma aha ee waa caadadood. Daliilkeedu wuxu yahay:
“waxa beryo dhaweyd aynu marag iyo markhaatiba ka nahay xubno xukuumadda ka socday oo Wajaale daahir yaa shamis ka lahaa: “Tog-wajaale waanu jecel nahay oo waa halkii eyga calanka UDUB loogu xidhay.” Daliil kalena wuxu yahay ilaa maantadaa aynu joogno ma haynno dawlad dhexe, mid hoose, Kulmiye, Boolis, Maxkamad iyo cid kale oo arrintan ka fal-celisa,” ayuu yidhi Mr Boobe. Geesta kale xoghaye Boobe, wuxuu ku dooday in xisbiga Kulmiye iyo xukumaddiisu ku hawlan yihiin hurinta dagaallo sokeeye iyo kala qoqob bulsho “Saddexda Xisbi meel wal oo dalka ahba waa ay tegi karaan, ka hadli karaan, iska sharrixi karaan. Waa xeer iyo xaagaan. Dalka, gobollada iyo degmooyinku uma xidhna Xisbiga Kulmiye.
Farriimaha caynkan ah Madaxtooyada iyo Xisbiga Kulmiye waxay ku hurinayaan dagaallo sokeeye oo dalka ka bilaabma doorashadana dib loogu rido. Farriimahan sadhaysan, xajiimaysan ee xanafta leh ee doollarka lgu laabayaa waxay horseed u yihiin in dalku kala googo’ oo qolaba meel sheegato sidaasna Xisbinnimadu ku baaba’do. Xukuumadda iimaanka-daran ee miyi iyo magaalaba murdisay waxa ku fillaa in ay soo bandhigto waxqabadkeedii 7da sannadood ee ay xilka haysay oo ay ku ladho ballan-qaad kale. Waa fursad annaan helin annagu oo ay na dheer yihiin,” ayuu yidhi Mudane Boobe.
Jawaabta Maayarka Gabiley
Geesta kale maayarka Gabiley, Maxamed Cumar Cabdi, oo wargeyska Warsugan arrintan wax ka waydiiyay ayaa xisbiga WADDANI ku eedeeyay masuuliyadda mudaharaadka lagaga soo horjeeday xisbigaasi. waxa uu ku dooday in dad xisbiga u jooga Gabiley masuul ka ahaayeen dhacdadaasi iyagoo adeegsanaya warbaahin gaar ah “ Waxa weeye Illaahay-buu been u sheegay ninka leh dawladda hoose ee Gabiley-baa door ku lahayd, been buu sheegay ninka leh xisbiga Kulmiye ayaa door ku lahaa, been buu sheegay ninka leh xukumadda ayaa door ku lahayd, waxay ahayd dhacdo kooban oo ku kooban qayb ka mid ah warbaahinta Gabiley,” ayuu yidhi Maayar Maxamed, isagoo intaasi raaciyay inay shaashadaha uun kaga war heleen dhacdadaasi.
Hase ahaatee wuxuu intaasi ku daray in arrintu markii hore u muuqatay been abuurad, markii dambena weji kale yeelatay “Dhacdadaas waxaa lug ku lahaa dad WADDANI ka tirsan, iyagoo uga jeeda inay yidhaahdaan xukumadda iyo xisbigeeda ayaa arrintaas fuliyay, markaa waxaanu leenahay xisbiga Waddani ha is hubsado inuu wada socdo,” ayuu yidhi Maayarka Gabiley. Maayarka Gabiley ayaa sidoo kale sheegay in bookhashadii madaxdii Waddani Gabiley ku tageen ay ka war hayeen, islamarkaana nabad ku soo noqdeen iyadoon magaalada wax rabash ah laga dareemin, balse arrintaasi saxaafad gaar ah iyo dad WADDANI ah ku koobnayd sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu sidoo kale sheegay in madaxda Waddani iyo telefishanka bulsho bookhdeen Gabiley si ay arrintan xaqiiqdeeda u ogaadaan, islamarkaana wada jir u sheegeen in arrintaasi been abuur ahayd, balse hadda ay la yaab tahay in xisbiga WADDANI yidhaahdo dawladda hoose ee Gabiley, Kulmiye iyo Xukumadda ayaa ka dambeeyay arrin ay hore waxba kama jiraan ugu tilmaameen.